Articles - Myanmar Bible
ဘယ်အရာမှ မကြောက်နဲ့ —— ခုတလော ကျွန်မ အမေရိကားကို မလာခင်တုန်းက မြင်မက်ခဲ့တဲ့ အိမ်မက်တွေ အတွေးထဲကို တိုးဝင်လာကြတယ်။ အမေရိကားမှာနေတာ ၁၃ နှစ်ရှိသွားပါပြီ။ ဒီကိုမလာခင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄ နှစ်တုန်းက အိမ်မက်ထဲမှာ “အမေရိကားကိုသွားရမယ်၊ ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့” ဆိုတဲ့ တန်ခိုးသြဇာကြီးတဲ့အသံက အိမ်မက်ကတဆင့် ကျမကို ပြောကြားလာပါတယ်။ ဘာမှမကြောက်နဲ့လို့ ဘုရားသခင်ပြောရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ၊ ကိုယ့်ထက် အစစအရာရာမှာ ခွန်အားကြီးတဲ့သူ၊ ရာထူးကြီးတဲ့သူ၊ အာဏာရှိတဲ့သူက မိမိအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုတခုခုလုပ်လာခဲ့ရင်၊ မိမိအကျွမ်းမ၀င်တဲ နေရာဒေသမှာ စတင်ခြေချလာတဲ့အခါမှာဖြစ်စေ၊ ကြောက်တတ်ကြတဲ့သဘောရှိကြပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ “မကြောက်နဲ့” ဆိုတဲ့စကားဟာ ၃၆၅ ကြိမ်ရှိပါတယ်။ သဘောပေါက်ကြလားမသိဘူး။ တစ်နှစ်မှာ ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက်ရှိပါတယ်၊ ဘုရားသခင်က ၃၆၅ ကြိမ်တောင် […]
သမ္မာကျမ်းစာကို ဗမာလို ဖတ်လိုပါက သင့်ကွန်ပျူတာမှာ ပိတောက် ယူနီကုတ်ဖောင့်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ရပါမယ်။ သမ္မာကျမ်းစာအတွက် မြန်မာပြည်တွင် ပထမဦးဆုံး တီထွင်ထားတဲ့ ပိတောက်ယူနီကုတ်ဖေါင့်ကို အသုံးပြုထားပါသည်။ 1. ပိတောက်ယူနီကုတ်ဖောင့်ကို ဒီမှာ ဒေါင်းလော့ဆွဲပါ PadaukOT 2. သင့်ကွန်ပျူတာထဲသို့ ထည့်နည်း အပေါ်က ဖေါင့်ကို ဒေါင်းပြီးပါက ထိုဖိုင်ကို ဖွင့်ပါ။ “PaduakOT” ဆိုတာကို ညာဖက်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ “OPEN” ပေါ်လာပါမယ်။ “OPEN” ကို ဘယ်ဖက် ခလုတ်နဲ့ ထပ်နှိပ်ပါ။ 3. Open နှိပ်ပြီးပါက အောက်ပါအတိုင်း ပေါ်လာပါမယ်။ Install ကို နှိပ်ပါ။ ပိတောက်ဖေါင့်သည် သင့်ကွန်ပျူတာထဲတွင် အလိုလိုထည့်သွင်းပြီးသား ဖြစ်ပါမည်။ ထို့နောက် မြန်မာသမ္မာကျမ်းစာကို နှစ်သက်သလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ ဗမာစာဖတ်နိုင်တဲ့ ဖေါင့်များစွာရှိသော်လည်း ယူနီကုတ်ဖောင့်များ မဟုတ်ကြသည့်အတွက် သမ္မာကျမ်းစာမှာ အသုံးမပြုထားပါ။ ဗမာစာဖတ်နိုင်သည့် အခြားဖေါင့်များ ရှိပါသေးသည်။ […]
You must download the Burmese Unicode font in order to read Burmese correctly. Burmese Bible in MyanmarBible.com is using specifically Padauk Unicode font which is the first Burmese Unicode font in Myanmar. 1. Please download the Padauk Unicode font PadaukOT 2. Instruction on how to install the font. After you download the zip file to your computer, right-click […]
Laica dik takih siar thei dingah, Laica hrangih tuah mi font na downloadatul. A hleice in t hnuai ih dawt te um mi siar thei dingah asi. “Ṭ” 1. A hmaisa bikahahnuai ih Doulos SIL unicode font download aw. DoulosSIL-4.112 2. Na computer sungah install dan. Na computer sungah na download zo asilena[…]
You must download the Chin Unicode font in order to read Chin correctly, especially the word with the dot under t, the letter “Ṭ” 1. Please download the Doulos SIL unicode font for Chin. DoulosSIL-4.112 2. Instruction on how to install the font. After you download the zip file to your computer, right-click “DoulosSIL-R” and right-click the […]
Bible Software Project
The Myanmar Bible Software Project involved the cooperative effort of volunteers from various nations withavariety of specialized skills e.g. Myanmar languages consultants, Bible translations, software programming, led by Ms. Levi Sap Nei Thang. The project is built upon the invaluable foundations of the work of many generations of Bible translators and Bible Societies.We […]
VISION OF THE BIBLE SOCIETY OF MYANMARThe vision of the Bible Society of Myanmar is carrying out the translation and publishing of the Bible into the national languages which meet the needs of the people in Myanmar that are faithful to the scripture text in their original languages, and which communicate the biblical message, at […]